YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, August 27
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/27/20130အကြံပြုခြင်း
Michale Aung Net
ကျနော့သူငယ်ချင်းရဲ့ သမီးလေး မြသက်ခြယ်ပါ။
မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၅လမ်းက နိုဗယ်လ် ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းမှာ ကျောင်းထားပါတယ်။
ဒီနေ့နေ့လည်ထမင်းစားကျောင်းဆင်းတော့ က လေးရဲ့နားထင်မှာ ပုံပါအတိုင်း ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဒါဏ်ရာရတာတောင် ကျောင်းက မိဘကိုအကြောင်းမကြားပေးသလို ဆေးကုသမှုတစ်စုံတစ်ရာလည်း မလုပ်ပေးပါဘူး…
အခု အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်ညနေ၅နာရီမှ ဆေးရုံသွားပြီးချုပ်ခဲ့ရပါတယ်…
မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာပြည်သူ့ အချစ်တော်မြန်မာသံအမတ်ဦးတင်လတ်အား အသစ်ပြောင်းခန့်မည်
By မလေးရှားနိုင်ငံရောက် ၈၈ မျိးဆက်နှင့် မျိးဆက်သစ် လူ့အဖွဲ.အစည်း
တမ်းထပ်မတိုးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ညွန်ကြားထားကြောင်း ၂၆-၈-၂၀၁၃ ရက်ထုတ်7Day Daily သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မလေးရှာနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးအသိုင်းဝိုင်းမှလေသံကတော့ နောက်ပြောင်းလဲရောက်လာမည့် သံအမတ်ကတော့ ပြည်သူအချစ်တော်ဦးအောင်းသောင်း၏
တူဖြစ်ဖို့ များတယ်ဟုပြောဆိုကာ ရှေ့ မင်းထက်နောက်မင်းဆိုးမှာကိုစိုးရိမ်နေကြသည်ဟုပြောဆိုနေကြပါဟည်။
ပန်းတနော်မှာဒီနေ.ဗုဒ္ဓဘာသာနေ. ဖြစ်တဲ့အတွက် (၉၆၉)တရားခွေများကိုဗုဒ္ဓဘာသာ အိမ်အတော်များများ နာကြားကြပါတယ်။
အဲဒီလိုနာကြားကြတဲ့အချိန်မှာ ပန်းတနော်မြို. အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက် ရေလှည်းလမ်း မှ ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်များလဲပါဝင်ပါတယ်။
ဒီလိုဖွင့်နေစဉ်မှာပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်နှင့်နီးသည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မိသားစုအိမ်မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အောင်နိုင်ဦး(ခ)ကာစင် ၏ ဇနီးဖြစ်သူ နှင်းမီုးခိုင် ( မူလ ကရင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာမှ အစ္စလာမ်ဘာသာသို.ကူးပြောင်းထားသူ) မှ မိမိအင်္ဂါစပ်နှင့် နှိုင်းကာ ++ တရားတွေ ++သီချင်းတွေ ဆိုပြီး အော်ဟစ်ပြောဆိုကာ ကုလားသီချင်းအား ဘေးအိမ်များမခံနိုင်အောင်အာင်ဖွင့်ပါတယ်။
(ယင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မိသားစုမှာ ပန်းတနော်နယ်ခံများမဟုတ်ကြပဲ
လွန်ခဲ့သည့် ၄ နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် ဆင်းဆင်းရဲရဲဖြင့် လာရောက်စီးပွာရှာသူများဖြစ်ပြီး နောင်ရိုးလက္ဘက်ရည်ဆိုင်ရှေ.တွင် နာရီများရောင်းချနေသူများဖြစ်သည်)
ထို.ကြောင့် နယ်ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာများမှ မိမိတို.ဘာသာတရာကို ရိုင်းစိုင်းစွာ မဆဲဆိုရန်
ပြောဆိုသည်ကိုလက်မခံပဲ ဆက်လက်ရိုင်းစိုင်းနေခြင်းကြောင့် အနီးအနားမှ ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်များကပါ ပါဝင်လာကြပြီး ၀ိုင်းဝန်း အချေအတင်ပြောဆိုနေစဉ် ပန်းတနော်မြို.နယ်ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်များ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ.၀င်များ အရန်မီးသတ်သတ်ဖွဲ.၀င်များ ပန်းတနော်မြို. အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဗလီဂေါပကများဖြစ်သော ကိုဝင်းနိုင် /ကိုရဲမြင့် စသည့် လူကြီးများရောက်ရှိလာကြပြီး ထိုကဲ့သို. မပြုမူရန်နှင့် ပန်းတနော်မြို.တွင် ဘာသာဝင်များ အေးချမ်းစွာအတူ
ရှိလာကြတာကြာပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းသို.ဖြစ်ရပ်များကို ပန်းတနော် မြို.ခံ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှလဲလက်မခံကြောင်း ယင်းမိသားစုများအား ပန်းတနော်တွင် ဆက်လက်ထားရှိပါက မြို.ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု.နှင့်အတူမလိုလားအပ်သည့် ပဋိက္ခများမဖြစ်ပွားစေရန် ပန်းတနော်မြို. အစ္စလာမ်ဘာသာ ဗလီ ဂေါပက ကိုဝင်းနိုင် /ကိုရဲမြင့်နှင့် မော်လ၀ီဆရာ တို.မှ ယင်းမိသားစုကို ပန်းတနော်မြို.မှ ထွက်သွားစေရန် ပြောဆိုခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းကာ ယင်းတို.နေထိုင်ခဲ့သည့်အိမ်ကို ဖြိုချခဲ့ပါတယ်။
( အိမ်အားဖြိုချစဉ်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အများစုပါဝင်သည်) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ တောင်းဆိုချက်ကြောင့် ဖြိုချခဲ့သည်မဟုတ်ပဲ ဗလီဂေါပက လူကြီးများ၏တောင်းဆိုမှု. တာဝန်ရှိသူများ၏ ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်သာဖြစ်သည်။
(အထက်ပါအချက်အလက်များအား အခင်းဖြစ်ပွားရာရပ်ကွက်မှ ပန်းတနော်မြို.ခံ များနှင့် တာဝန်ရှိသူအချို. တို.မှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်သည်)
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း လှုံ့ဆော်မှုများ မဖြစ်ပွားအောင် ထိန်းသိမ်းရန် အရေးတကြီး တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း
ဖြစ်စဉ်များကို မတင်ပြမှီ မိမိတို့ မြန်မာ့လူမှု ဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ယက်သည် ဘာသာရေး အသွင်သဏ္ဍာန်ဆောင်သော ရန်လို မုန်းပွား အဓိကရုဏ်းဖြစ်မှုများကို မလိုလားပါကြောင်း။
တည်ငြိမ်စွာဖြင့်ပင် ဖြစ်စဉ်အပေါ်ကို အမှန် အတိုင်း သုံးသပ်ချက် ကောက်နှုတ်၊ ဥပဒေပါ အတိုင်း ထိရောက်စွာ အရေးယူပြီး နောက် ယခုကဲ့သို့ အလားတူ အဖြစ်ဆိုးမျိုး ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်မလာရန် ဘယ်လို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းမလဲ ဟုသာ တွေးဆစေလို ပြင်ဆင်စေလိုသည့် စေတနာဖြင့် တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သည့် ဘက်မျှ ဘက်မလိုက်ပဲ ဒေသခံ လူထုမှ ဆက်သွယ် သတင်းပေးပို့လာသောကြောင့် ယနေ့ ကြားသိရသည့် ဖြစ်စဉ်ကိုသာ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခု ရက်ပိုင်း အတွင်း ဧရာဝတီတိုင်း ပန်းတနော်မြို့ တွင် လူမျိုးရေး အသွင် သဏ္ဍာန်ဆောင်သော ရန်စောင်မှု ၊ ၇န်လိုမှုနှင့် တရားစီရင်ရေး ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် လှုပ်ရှားမှု တချို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့သော သုံးပတ်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုင်း၇င်းသူ တဦး လူမျိုးခြား မိသားတစု လက်ချက်ဖြင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်သေဆုံးခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ် အပေါ် မကျေနပ်သော ဒေသခံ ပြည်သူလူထု အကြား ရန်မီးပွားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုလို ဘာသာရေး လူမျိုးရေးကို အခြေခံသော လူထု အတွင်း မကျေနပ်မှုများဖြစ်ပွားလာသည်မှာ သုံးပတ်ခန့်ရှိပြီ ဟု ဒေသခံ တို့က ဆိုသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပန်းတနော်မြို့နယ် ဇရပ်လှ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ကုလားလူမျိုး ကုန်စုံဆိုင်ရောင်းချသည် မိသားစု တစု၏ ( အဖေ နှင့် သားများ သုံးဦး တလှည့်စီက ) က သူတို့ အိမ်တွင် အိမ်အကူ အဖြစ် ငှားရမ်းထားသော ( အလုပ်လုပ်နေသည်မှာ သုံးနှစ်ခန့် ရှိပြီဆိုသောကြောင့် ၁၃ နှစ် အရွယ်ခန့်ကပင် ခိုင်းစေလာခဲ့သည့် ) ကရင်တိုင်းရင်းသူ အသက် ၁၆ နှစ်ခန့် မိန်းမပျိုအား အိမ်တွင် ပိတ်ထားပြီး လူမဆန်စွာ မုဒိမ်းအခါခါ ကျင့်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
အမျိုးသမီးငယ်လေး ကိုယ်ဝန် ရသွားသော အခါ ထို ကုလားလူမျိုး၏ ဇနီး ရှကီလာ ဆိုသူက ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရသူ အိမ်ဖေါ်အသက်မပြည့်သေးသူ ကလေးမကို ရန်ကုန်သို့ ခေါ်သွားပြိး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့သည်။
သန္ဓေသား ကို အရည်ဖျော်ချပြီး ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သော်လည်း အရိုးစုနှင့် ဦးခေါင်းတို့မှာ အရည်မပျော်ပဲ သားအိမ်တွင် ကျန်ရစ်ရာမှ အပုပ်ဆန်ကာ နာမကျန်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့နှင့် ထို အိမ်ဖေါ်မလေးကို ပန်းတနော် မြို့နယ် သရက်ငူ ကျေးရွာ ရှိ သူတို့ အိမ်သို့ ပြန်ခေါ်လာပြိး အိမ်တွင်းတွင်ပင် ထိန်းချုပ်ကာ ကြိတ်ပြီး ဆေးကုသစေသည်။
လူမသိ သူမသိ ဆေးကုသရင်း ရောဂါ ပြင်းထန်လာပြီး ထို အိမ်ဖေါ်မိန်းကလေး အသက် (၁၅နှစ်ကျော်ခန့် ) သည့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။
သို့နှင့် ထို ကုလား မိသားစုက အလောင်းက မီးသဂြိုဟ်ရန် ကြိုးစားနေချိန်တွင် ထိုသေဆုံးသူနှင့် အတူနေသူ အိမ်ဖေါ်မလေးက ငိုယိုပြီး သူ့သူငယ်ချင်းအား မုဒိန်းကျင့်ခံရပုံ၊ ဖျက်ချကြပုံ၊ အခု သေတော့ မီးရှို့ရန် လုပ်ကြပုံများကို ငိုငို ပြောပြကြမှ ပတ်ဝန်းကျင်နေ မြန်မာများ သံဃာတော်များ ကရင်တိုင်း၇င်းသားများက အလောင်း မီးရှို့ခွင့် မပေးပဲ ဆေးရုံသို့သယ်ဆောင် ရင်ခွဲ စစ်ဆေးသော အခါမှ မုဒိမ်းကျင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ လူသေ အလောင်းဖျောက်မည့် လူမဆန်သော ၇ာဇ၀တ်မှုကြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာ ဇရပ်လှ ကျေးရွာ ကို အုပ်ချုပ်ရသူ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းမှူး ထွန်းထွန်း ( ကျနော့်အား ပန်းတနော်မြို့နယ် အောက်ကန်ဇင်းတောကျေးရွာတွင် လူထုအား စကားပြောမှု ရဲကို အကြည်ညိုဖျက်စေမှုဖြင့် တရားစွဲ ထောင်ချခဲ့သူ ရဲအုပ် ထွန်းထွန်း) က ကုလားများမှ အဆိုပါ အလောင်းကို မီးရှို့ရေးအတွက် တွန်းအားပေးရာတွင် ပါဝင်သောကြောင့် ဒေသခံ တို့ အကြား ပြည်သူ့ဘက်ကို မရပ်တည်သော ဥပဒေ ဘက်တော်သားများ လုပ်ရပ်ကြောင့် မကျေနပ်မှုကို ပိုမို ဆိုးဝါးလာခဲ့သည်။
ယင်းသို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြိးနောက် တရားစိရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ဘက်က ဒေသခံ လူထု အရှေ့မှောက် တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ စစ်မေး စီရင်ခြင်း မပြုပဲ။ လူသေမှု ဖြင့်သာ အမှုဖွင့် ခဲ့သည်ဟု ကြားသိရသည့် အတွက် ဒေသခံ လူထုက ပိုမို ဒေါသထွက်ခဲ့ကြကြောင်း။
အထက်ပါ ဖြစ်စဉ်ပါ အကြောင်းအရာများမှာ ပန်းတနော် ဒေသခံ လူထုမှ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောကြားသည့် အခြေအနေများကို စုစည်း တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယင်းသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာက ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် ကာကွယ်မှု များ ထိုက်သင့်သလောက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသော်လည်း လူထု အကျိုး ရှေးရှုသည့် ဖေါ်ထုတ်ချက်၊ ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်လာနိုင်သည့် အရေးကို ကြိုတင်ကာကွယ်သော ရှင်းလင်းပြဆိုမှုများ ပြုလုပ်ရန် အားနည်းခဲ့သည်ဟု လူထုက သုံးသပ်သည်။
ယခု ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များကို တရားဥပဒေ အရာ တိကျစွာ ဖေါ်ထုတ် အရေးယူမည်ဆိုပါလျင် ကိုယ်ဝန်သည် မိန်းမ သဘောမတူပဲ ပဋိသန္ဓေဖျက်ချမှု ပုဒ်မ ၃၁၃ အရ အနည်းဆုံး ထောင်ဒါဏ် တသက်တကျွန်း ၊ ဆေးကုသခွင့် မပေးပဲ သေဆုံးသွားစေမှု လူသေမှု ပုဒ်မ. ၃၁၂(ဃ) သေဆုံးသွားသည့် အတွက် ဆယ်နှစ်အထိ ထောင်ဒါဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။
လှုပ်ရှားအသက်ရှင်နေဆဲ ၀မ်းတွင်း ကလေးကို သေစေခြင်း ပုဒ်မ ၃၁၆ အရ ကလေးကို သေစေတဲ့ အတွက် ထိုက်သင့်မည့်ပြစ်ဒါဏ်က အနည်းဆုံး ထောင်ဒါဏ် ဆယ်နှစ်။
ကိုယ်ဝန်သည်ကို သေစေမှု ၃၀၄ (က) ၊ ဖျက်ချပေးသော ဆရာဝန်ကိုပါ အရေးယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ လူထုကို အသိပေးပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို တိကျစွာ အကောင်အထည်ဖေါ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ လူသား မဆန်သော ရာဇ၀တ်မှုကြီးမျိုးကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် တရားရုံးမှာ မစစ်ဆေးရပဲ ။ ခရိုင် တရားရုံးတွင်သာ လူထု ရှေ့မှောက် စစ်ဆေး စိရင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည့် တရားရုံးတော်နှင့် တရားစီရင်ရေး စနစ်ကို ဒေသခံ ပြည်သူလထုက အယုံကြည် ကင်းမဲ့ခြင်းသည်လည်း ရပ်ရွာ မငြိမ် မသက်မှုကို ဖြစ်စေသော အဓိက အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်နှင့် လုံခြုံရေး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး များစွာ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေသေးသည့် ပန်းတနော် ဒေသ အကြောင်း မိမိတို့ များစွာ တင်ပြခဲ့ဖူးပါသည်။
သို့သော်လည်း သိသာထင်ရှားသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ဆောင်လာခြင်း ကို မတွေ့ရှိရပါ။
ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများသည့် ဒေသတွင်း မတည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ဖြစ်စဉ်များဖြစ်သောကြောင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် လူမှုဘ၀များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို သာ ဆောင်ရွက်နေသည့် မိမိတို့ ကွန်ယက်က မိမိတို့ တောင်သူလယ်သမား ရေလုပ်သား သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး မလိုလားအပ်သည့် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ မဖြစ်ပွားစေရန် ဆူပူမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ပြည်သူ့ အကြား တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရရန် မှာ လူထု မျှော်လင့်သော တရားရေး မဏ္ဍိုင် အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်သို့ ရှေးရှုသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ဆောင်ပေးမှ ဖြစ်ပေမည်။
သို့ကြောင့် လက်ရှိအားဖြင့် မတရားဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်သော ရေလုပ်သား ၂၄ ဦး အမှုပိတ်သိမ်းပြီးသည့်တိုင် ဆက်လက် ဖမ်းဆီးထားခြင်း၊ အခြားသော ဧရာဝတီတိုင်း တိုင်းလုံးတွင် လယ်သမား ရေလုပ်သားပေါင်းများစွာကို ပုဒ်မ အမျိုးမျိုးဖြင့် တရားစွဲဆို ရုံးချိန်းများဖြင့် ငွေကုန်ကြေးကျ ဖိစီးနေစေခြင်း စသည့် အကြောင်းများ၊ လူထု မကြည်ညို မလိုလားသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ခေတ်ဟောင်းက ပုံစံ အတိုင်း ဆက်လက် ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးထားခြင်းတို့သည် ဒေသတွင်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်ပွားလာစေခြင်းကို တွန်းအားပေးနေသည့် အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း အတွင်းမှ မြို့နယ် အသီးသီးတွင် မလိုလားအပ်သည့် ဆူပူမှုများ ၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ မဖြစ်ပွားအောင် မိမိတို့ တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ အနေဖြင့်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်၊ ဖြစ်ပွားလာနိုင်သည့် အခြေအနေများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိစစ်မေး လေ့လာပြိး အများပြည်သူ့ အကျိုးကို သာ ရှေးရှုသော ပွင့်လင်းမြင်သာ ဘက်မလိုက်သည့် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ အဆောတလျင် အရေးတကြီး လုပ်ဆောင်စေလိုပါကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
မိမိတို့လူမှုကွန်ယက်များကို ဖိတ်ခေါ်မည်ဆိုပါကလည်း ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် ကျေးရွာများအထိ ကွင်းဆင်းပြီးလူထုအကြား တည်ငြိမ်သော ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ ဆွေးနွေးပေးခြင်းဖြင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုများ ရရှိအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့လူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ယက်
Miss Supranational 2013 တို့ Bialowieza Forest သို့ သွားရောက်လည်ပတ်
မယ်စကြာဝဠာ Miss Universe ပြိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံကိုယ်စားပြု မယ်စကြာ ၀ဠာမြန်မာ Miss Universe Myanmar ကို ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပ ရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်ကျော်က မယ်စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ဖူးပြီး အခုပြန်လည် ၀င်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
DVB - ၂၇ သြဂုတ် ၂၀၁၃
ဦးသန်းရွှေမှာ ကျောက်ကပ်မကောင်းသဖြင့် ဆေးထိုးနေရကြောင်း
ဒီနေ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ မစ္စတာ လေရီဂျက်ကင်က ၂၀၁၅ နောက်ပိုင်းမှာ ဦးရွှေမန်းမရှိတော့ ကြောင်း ဦးဌေးဦးနေရာ ရလာမည်ဖြစ်ကြာင်းသမ္မတ မဖြစ်ရင်တောင် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီး ( ငြိမ်း) ဦးသန်းရွှေမှာ ကျောက်ကပ်မကောင်းသဖြင့် ဆေးထိုးနေရကြောင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းအလဲ သည် လက်ရှိ DSA ၂၂ လူငယ်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များပေါ် များစွာမူတည်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
သို့ သော် လက်ရှိ ဒုချုပ် အပတ်စဉ် ၂၂ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးစိုးဝင်းမှာ ကာချုပ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ လက်ရှိဒုချုပ်မှာ ၂၀၁၅ တွင်ကာချုပ်ဖြစ်မည်။ မစ္စတာ လေရီဂျက်ကင်ကတော့မဖြစ်ပါလို့ ပြောပါသည်။ ထိုကြောင့်သူနှင့်ကျွန်တော်လောင်းကြေးထပ်ထားခဲ့သည်။
အန်တီစုနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိပြည်တွင်းပြည်ပတွင်ရှိနေသောမြန်မာနိုင်ငံသား ပညာရှင်များအားပါတီအတွက် မခေါ် ယူခြင်း သည်မှားယွင်းသောလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ဦးသိန်းစိန်မှာမူထိုသို့ မဟုတ်ပဲ ပညာရှင်များကိုခေါ် ယူ နေရာပေးထားသည်ဟုပြောခဲ့သည်။
ယနေ့ ၂၇.၈.၂၀၁၃ ညနေ ၃ နာရီတွင် ယခင်ဖမ်းဆီးနေကျဖြစ်သော ကားဖြင့် တစ်စီးအပြည့် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးသည့်ရဲများမှာ ဒမ်ဝမ်ဂီ မှရဲများပင်ဖြစ်ကြောင်း ..။
ထပ်မံပြီး ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် ကားအမှတ် ၅၇၂၄ ( ဘန်ကားအဖြူရောင် ) ဖြင့် ကားအပြည့် ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရသည် ။
ဖမ်းဆီးသူများကိုသတိထားရန်မှာ ယခင်ဖမ်းသကဲ့သို့ ရဲဝတ်စုံ ၊ ရေးလားဝတ်စုံတို့ဖြင့် မဟုတ်ပဲ အရပ်ဝတ်များဖြင့်သာ ဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေတာကြောင့် ကွာလာလမ်ပူ လမ်းသွားလမ်းလာ မြန်မာများ သတိထားသင့်ပါသည် ။
ယခင်အဆိုပါ ဖမ်းဆီးမှုကို ကိုတာရာယာရှေ့တွင်သာ ဖမ်းဆီသော်လည်း ယခုမြန်မာဆိုင်တန်းသို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုမှာ ၂ ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်သည် ။
ဖမ်းဆီးသည်ဆိုသော်လည်း ယခင်း Operacy များကဲ့သို့ မှန်မှန် မမှန်မှန် ဖမ်းဆီးသည်မဟုတ်ပဲ အထောက်အထားမရှိသူများကိုသာ ဖမ်းဆီးပြီး အထောက်အထားပြနိုင်သူများကိုမူ စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့် ပြန်လည် သွားခွင့်ပြုကြောင်းတွေ့ရသည် ။
ပြီးခဲ့သည့် August လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ် ။ ယနေ့ ၂၇.၈.၂၀၁၃ တွင် ကား ၂ စီးဖြင့် ၂ ကျော့်ပြန်တစ်ကြိမ် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ကွာလာလမ်ပူသို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လာရောက်မည့်သူများသိအောင် ရေးသားပေးပါသည် ။
သို့ကြောင့် ကွာလာလမ်ပူသို့လာမည်ဆိုပါက ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာတွင် အဖမ်းအဆီးရှိမရှိကို Mesage ပို့ကာ မေးမြန်းနိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ မလေးရှားရောက် မြန်မာများ facebook စာမျက်နှာမှ ဖမ်းဆီးသည်နှင့် ချက်ချင်း ရေးသားတင်ဆက်ပေးမည် ။
အမေရိကန်စစ်တပ်က ဆီရီးယားကိုဝင်တိုက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု အမေရိကန်ကာကွယ်ရေး
၀န်ကြီး Chuck Hagel ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဆီရီယားကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အတွက် သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ အမိန့်ကို စောင့်နေပြီလို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဆီရီယားသမ္မတ အာဆတ်ကို ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့ သမ္မတတပ်ဖွဲ့ တွေအကြား ဓာတုလက်နက်တွေနဲ့ 
ပစ်ခတ်ကြတဲ့ အတွက် ကလေးငယ်တွေအပါအ၀င် လူတွေအများအပြား သေဆုံးအပြီးမှာ ယခုလို
ကမ္ဘာမှာ စစ်အင်အားအကြီးဆုံး အမေရိကန်က ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ငြင်းလို့ မရနိုင်တဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ အတူ
အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ဓါတုအဆိပ်လက်နက်တွေနဲ့ 
သတ်ဖြစ်မူအတွက် - ဆီးရီးယားကို အိုဘားမားက တိုက်ဖို့ 
ပြင်နေပါပြီ။ သူ့ ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင် ဗျူဟာမြောက်လက်နက်
တွေ (Strategic Weapons) နဲ့ အစ္စရေးကိုတိုက်မယ်လို့ 
ဆီးရီးယားကလည်း တုံ့ ပြန်ကြိမ်းဝါးလိုက်ပါတယ်။
အီရန်ကလည်း သူရဲ့ ရှိရိုက်တ်မွတ်ဆလင်မဟာမိတ်ဆီးရီးယား
ကိုတိုက်ရင်မှားမယ်လို့ယူအက်စ်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေကို
သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ယူအက်စ်အနေနဲ့ဆီးရီးယားကို
မယ်လို့ရုရှားကလည်း အိုဘားမားကိုသတိပေးတယ်ခင်ဗျ။
အိုဘားမားဘက်က ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွမ်း နဲ့ 
ပြင်သစ်သမ္မတဖရန်စစ် ဟောလန်ဒီ တို့ က အသင့်ရှိနေပုံ
ရပြီး၊ သည်နေ့ မှာတော့ အိုဘားမားဟာ သူရဲ့ နေတိုးမဟာမိတ်
ကနေဒါ ၀န်ကြီးချုပ် စတီဗင်ဟားပါး နဲ့သြစတေးလျား ၀န်ကြီး
ချုပ် ကီဗင် ရတ်ဒ် တို့ နှင့်လည်း ဆီးရီးယားကိစ္စကိုဆွေးနွေး
(၂) နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ဟာ လူသိန်း
မူကြောင့် အရပ်သားများအပါအ၀င် လူ (၁၃၀၀) ကျော်သေခဲ့
ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းတခုလုံး မီးဟုန်းဟုန်း
တောက်မလား ဆီးရီးယားရဲ့အာဆတ်ဒ် အစိုးရပြုတ်ကျမလား၊
ဆီးရီးယားဟာ Iraq လိုပဲ fail state ဘ၀ရောက်မလား၊
အစ္စရေးနဲ့ အီရန်အကြား ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ .... မြေထဲ
ပင်လယ်က ရုရှားရေတပ်ဘာဆက်လုပ်မလဲ စတဲ့ ... စတဲ့
မေးခွန်းတွေနဲ့ အတူ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Al-Nusra Front အမည်ရ ဆွတ်နီမွတ်ဆလင်အစွန်းရောက်
အုပ်စုတစ်စုကလည်း အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်က အစွန်းရောက်
မွတ်ဆလင်တွေကို စုစည်းပြီး မြန်မာပိုင်နက်အတွင်းမှာ
အခြေစိုက်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း National Express Malaysia
ကနေ Salafist Sheikh Bilal al-Masri ဆိုသူက ဧပြီလ (၁၃)
၂၀၁၃ ရက်နေ့ မှာ ကြိမ်းဝါးခဲ့ပါသေးတယ်။
သြဂတ်စ် (၂၇)၊ ၂၀၁၃
နေ့အချိန် ဖွင့်သည့်ကလပ်များ (Day Club) ကို အရေးယူတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအ ဖွဲ့ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူကပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှတာဝန်ရှိသူက Day Club တွေရှိနေလို့ ကလေးတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ ပိုပျက်စီးကြ တယ်ဆိုပြီး တိုင်တာ
တောတာ တွေရှိလာတယ်။ ဒါကြောင့် Day Club တွေကို အရေးယူဖို့လုပ်နေ တယ်။ တကယ်တော့ နိုက်ကလပ် ကလဲ တရားဝင်ဖွင့်ခွင့်ပေးထား
စင်ကာပူမှာ ဟိုသင်္ကြန်တွေ ဘာတွေ ကျင်းပတဲ့ ကွင်းတွေ ၊ အားကစားရုံတွေ ဘာတွေ မရှိတော့ဘူးလားဗျာာာ ။ ဘယ်မှာလုပ်လုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နေပူ မိုးရွာ ထီးကလေးနဲ့ လာမှာပါ ။ ခန်းမတွေ ဘာတွေ မလိုပါဘူး ။ F1 ကျင်းပ ကားပြိုင်ကွင်းဆိုလည်း လာမှာပါ ။
ပိုက်ဆံနဲ့ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ကိစ္စကိုတော့ အ၀ါကဒ်ထောင်ပြထားတယ်နော် ရာဇ၀င်တွေ ဖြစ်သွားမယ်
စင်ကာပူနေ မြန်မာများကလည်း အပြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်ကိုပိုကြိုက်ကြပါသည်။ ပြသနာက စင်ကာပူရဲသည် လူမှုရေးပွဲလမ်း(သဘင်)များကိုသာ အောက်ဒိုးခွင့်ပြုပြီး ဒါမျိုးကို အင်ဒိုးပဲခွင့်ုပြုနေတာ ပါပဲ။ အင်ဒိုးမှာ လူသောင်းကျော်ဆန့်မဲ့နေရာကို အခုရှာဖွေကြိုးစားနေကြသော်လည်းအချိန်ကပ်သိရတဲ့အတွက် so many steps to do လို့ပြောပါရစေ... စင်ကာပူအစိုးရဟာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလောက်တောင် ဒီမိုကရေစီမရှိတဲ့အပြင် ဒေါ်စုအပေါ် J အကြီးကြီးရှိနေမှာပါ..အခုကိစ္စတောင် သူတို့တရားဝင်မကြေငြာပါ ကိုယ့်ဘာသှာSingapore SUmmit 2013 web site မှာတွေ့ကြလို့သိကြရတာ..နောက်တချက် က အောက်ဒိုးလုပ်ရင် ဒေါ်စု လုံခြုံရေးကို စိုးရိမ်ရပါသည်။ လက်မှတ် ဆိုတာက ခန်းမှငှားစရိတ်ကို ကာမိယုံလို့ထင်ပါတယ် (မသန့်ရှင်းတဲ့ စပွန်ဆာတွေ မယူချင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်) ...စင်ကာပူအစိုးရထိပ်ပိုင်းကို တက်ကိုင်ပြောနိုင်လောက်တဲ့ level တူြုမန်မာရှိ၇င်တော့ တမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်.. အဲဒါသံရုံးပါပဲ....နှစ်ဘက်မျှတစွာ .တွေးမိတာတွေပါ...ပွဲစီစဉ်သူထဲ ကျနော်မပါပါ
လာမှာကို အတိအကျ သိရချိန်မှာ အရမ်း အချိန်ကပ်နေပါပြီတဲ့။ stadium ကို စလုံး အစိုးရက ခွင့် မပြုပါဘူးတဲ၊ Expo လို ၊ လူ ၅၀၀၀ ဆန့် တဲ့ star vista တို့ လို က ၆ လလောက် ကြိုဘုတ်မှ ရတာကို။ ဒါကြောင့် NTU Auditorium မှာ လုပ်ဖို့တက်သုတ်ရိုက် စီစဉ်ထားပါတယ်တဲ့.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာ့အလည်မှာ ဂုဏ်ယူစရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးတည်နေသ၍ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာ မဟုတ်တဲ့ လေးစားဖွယ်ရာ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူလာတဲ့ခရီးစဉ်မှာ စင်ကာပူရောက် မြန်မာများနဲ့ နေရာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းမှာ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းဖို့ကို စင်ကာပူရှိ မြန်မာသံရုံးက စင်ကာပူနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (အစိုးရ)နဲ့ ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကုန်ကျစားရိတ်ကို မြန်မာသံရုံးက တာဝန်ယူ (လုပ်ငန်းရှင်တွေကို စပွန်ဆာဖိတ်ခေါ်ချင်ခေါ်)၊ ဝင်ကြေးကို လူတိုင်းအခမဲ့၊ နေရာကို Fort canning park ဖြစ်ဖြစ်၊ လူများများဆန့်နိုင်တဲ့ Jurong Town Hall မှာဖြစ်ဖြစ်လုပ်။
လုံခြုံရေးကို စင်ကာပူအစိုးရကို တာဝန်ယူခိုင်း (ဒါက မြန်မာသံရုံးအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရင်ရပါတယ်။)
စင်ကာပူက မြန်မာတွေ သံရုံးကို ပေးထားခဲ့ကြရတဲ့ အခွန်တွေဆိုတာ နည်းနည်းနောနောမှ မဟုတ်တာ။
ဒီပိုက်ဆံတွေက ဟိုသူ့သမီး၊ ဒီသူ့ သမီးတွေ လာရင် စင်ကာပူမှာ ရှော့ပင်ထွက်ဖို့မှ မဟုတ်တာ။
စင်ကာပူရှိ မြန်မာသံရုံးအနေနဲ့ စင်ကာပူရောက် မြန်မာတွေကို ဒီလောက်တော့ ပြန်လည်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဒါမျိုးပွဲဆိုတာ ဖွတ်တီးဖွတ်ချက်ပွဲလို ကမျောက် ကချောက် လုပ်လို့မှ မကောင်းတာ။
မင်္ဂလာပါရှင် …1876 hot line မှကြိုဆိုပါတယ်ရှင်
မြန်မာစကားဖြင့်နားထောင်လိုပါက နံပါတ်(၁) ကိုနှိပ်ပါရှင်………………
I.T နည်းပညာများအတွက် နံပါတ် (၁) ကိုနှိပ်ပါရှင်
Update သတင်းများဝန်ဆောင်မှုအတွက် ………………
တီတီတန်တန် ~~တန်ဒန်ဒန်~~… တန်းတန်းတီတီ~~~
စောင့်ဆိုင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် သက်ဆိုင်ရာ Agent နဲ့ အမြန်ဆုံးချိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်ရှင်
operator များမအားလပ်သေးပါသဖြင့် ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပြီးပြန်လည်ခေါ်ဆိုပေးပါရှင် …
-ဘယ်တော့မှဆက်လို့မရဘဲ ဖုန်းဘေလ်တွေသာတဖြုတ်ဖြုတ်ကုန်သွားတဲ့ Hot Line ကြီး … ကျန်းမာပါစေနော် … တကယ်မေတ္တာပို့တယ် $@*#-@&#*#*
မလေးရှားမှာအရင်လတွေက မြန်မာတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖတ်ခဲ့မြင်ခဲ့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲသတင်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတွေသေခဲ့ကြပါတယ်။သတိရအုံးမှာပါ ။ပြည်တော်ပြန်မျက်နှာပန်း လှဖို့ ခရိုနီသူဌေးတွေက လေယဉ်တွေနဲ့ အခမဲ့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြတာတွေ့ မြင်ခဲ့ရပါတယ်.။ မြန်မာအစိုးရကလဲ မိမိနိုင်ငံသားတွေ ဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုးလို့လူမှုရေးအကူအညီတွေ ပံ့ပိုးခဲ့တာတွေ သတင်းမီဒီယာတွေက အလျင်မှီ သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ဘူးတာ တွေ့ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ မလေးရှားကို မြန်မာတွေ အလုပ်လုပ်ကြဖို့အခု သဘောတူစွာ နဲ့မလေးရှားကို ပြန်ထွက်ခွာနေကြပါပြီ။
အရင်က မလေးရှားသတင်းကျနော်တင်ခဲ့တဲ့ သတင်းလဲ သူဘဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နံမယ်မဖော်ပြတော့ပါဘုး
သတင်းလာပေးတဲ့သူ ရဲ့ ဖုံးကို ကုလားတွေ ဖုံးဆက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
"သူရဲ့ မိန်မဘက်က အမျိုးတွေကိုလဲ ဆလန်ရမ်းကပြောင်းခိုင်းထားတယ်...
ဆလန်ရမ်းက အကြမ်းဖက်မယ့်ကုလားတွေက သူတို့ အသားအစ်ပီးတဲ့အခါ
အကြမ်းဖက် လူသတ်ပွဲထပ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားကြတယ်တဲ့
ဟုတ်တော်ရှိ မဟုတ်တော်ရှိ သတိတော့ပေးချင်ပါတယ်
မွတ်မဟုတ်တဲ့ ကျန်ဘာသာဝင်မြန်မာအားလုံးကို အကြမ်းဖက်မယ်ပြောတယ် "
ကဲ ဗျာ ခက်ရချီပေါ့
တကယ်ဖြစ်မှာပါလို့ ရေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် နီးစပ်ရာ မလေးရှားမှ မိတ်ဆွေများ သတိရှိကြဖို့ လိုပါပြီ.။
ဒီနေရာမှာ မြန်မာအစိုးရလဲ သတိကြီးဖို့ လိုပါပြီ .။ မိမိနိုင်ငံသားတွေကို တစ်ခုခု ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ.
မလေးမှာ ရှိတဲ့မြန်မာ သံရုံးလဲ သတိထားကူညီပေး ကာကွယ်ပေးပါဗျာ..။
ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်မြန်မာတွေကို သံရုံးက လည်ပင်းညှစ်အခွန်ကောက်ဖို့ ဘဲ ချောင်းမနေသင့်တော့ဘူး။
တဖက်က ရန်ကိုကာကွယ်သင့်ကြောင်း အကြံပေးလိုက်ပါရစေဗျာ။
အဖွဲ့ချုပ်၂၅နှစ်ပြည့်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး ပါဝင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိ
r DVB TV News
အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၂၅နှစ်ပြည့်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး ပါဝင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
စာအုပ်ဘိုး. မတတ်နိုင်တဲ့... ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာလောကကိုဝင်မဲ့လူငယ်များကိုအခမဲ့..ပေးပါတယ်.
(၃) ကြိမ်မြောက်.စာမူကို..စာစစ်ပြီးပါပြီ..။ ဒီနေ့..ဒီဇိုင်နာဆီကို...ပြန်ပို့ပါ့မယ်..။
Tanker အကြီး တွေမှာသုံးတဲ့.. Medium Pressure Range Boiler နဲ့..သူ့ရဲ့..အစိတ်အပိုင်းလေးတွေအကြောင်း..
သိရအောင်..လည်းထည့်ထားပါတယ်..။ ကိုယ်တိုင်..လက်တွေ့ကြုံခဲ့စဉ်မှာ....အခက်အခဲ..ရှိခဲ့တာမို့ပါ..။ ကြားဘူးနားဝရှိထားတော့....
Instruction Manual နဲ့တွဲလိုက်တော့.. လုပ်လို့..ရသွားပါတယ်.။
ကျွန်တော်တို့..အများစုက..7bar-10bar Low Pressure Boilers တွေနဲ့ဘဲ.. အလုပ်လုပ်ရတာ..များပါတယ်..။
Tanker တစ်ချို့မှာ..30bar ထိရှိတဲ့..Medium Pressure Boiler များသုံးပါတယ်..။
Low Pressure အတွက်..Steam to Steam Generator ကနေ..ပြန်ထုတ်ပြီး..သုံးပါတယ်..။
Steam to Steam Generator ဆိုတာ..ဘာမှ..မဟုတ်ပါ..။
Heat Exchanger တစ်မျိုးပါ..။ ဒါပေမဲ့..Boiler Mountings တွေ..ပါပါတယ်..။
အင်ဂျင်နီယာအငယ်အများအတွက်..ရည်ရွယ်ပေမဲ့..လေ့လာလိုသူ..အင်ဂျင်နီယာ အကြီးများအတွက် လည်း..အသုံးဝင်မှာပါ..။
1. Basic Marine Engineering Knowledge (4000K)
2. Separator (3000K)
3. Marine Engineering Knowledge Questions & Answers (Main Engine) (3000K)
4. Fundamentals of Maritime Electronic Apparatus (4000K)
လူထုမေတ္တာ (မဟာ.ဗန္ဓုလလမ်းနဲ့..ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းဒေါင့် မီးပွိုင့်အနီး)
သင်တန်းကျောင်းများက..မှာလိုရင်..၀၁-၅၁၄၃၀၆ နဲ့ ၀၉- ၄၉၂၄ ၆၁၁၇ ကိုဆက်သွယ်ပါ..။ ၁၀% လျော့ပေးပါတယ်..။ လာယူရပါ့မယ်..။
နွမ်းပါးတဲ့..၊ စာအုပ်ဘိုး.မတတ်နိုင်တဲ့. .ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာလောက..ကို..၀င်မဲ့..လူငယ်များ..ကို..အခမဲ့..ပေးပါတယ်..။
၉၉၊ သီရိ(၄)လမ်း ၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မှာ..လာပြီး..တောင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
အမည်..မမေးပါ..။ မှတ်မထားပါ..။ ဘယ်သူ့မှလည်း..မပြောပါ..။